? I-TAROT ka-Ewe okanye Hayi SIMAHLA nakwi-Intanethi | Ikhadi liqhuba 2019
Ngaba ufuna ukwazi impendulo yento ethile? Isisombululo esifanelekileyo kunye EWE okanye HAYI tarot! Buza yonke imibuzo oyifunayo kwaye ikukhathaze SIMAHLA nge Oracle Ewe okanye Hayi.
Ngexesha elifutshane uya kuzazi iimpendulo zale mibuzo ekungekho mntu uyifunayo okanye onokuyiphendula, phelisa ukungaqiniseki kwemihla ngemihla kwaye uqhubele phambili kumbulelo wakho tarot yasimahla.
1 I-Oracle ka-Ewe okanye Hayi Imali: Simahla kunye ne-Intanethi
2 Tarot ewe okanye hayi amakhadi ama-5
3 Tarot ewe okanye hayi ichanekile kwaye iyinyani
3.1 Ukusetyenziswa kwetarot yasimahla kwi-Intanethi ewe okanye hayi
3.2 Isebenza njani ewe okanye hayi
4 Ukufundwa kwamakhadi asimahla ewe okanye hayi ethembekileyo
I-Oracle ka-Ewe okanye Hayi Imali: Simahla kunye ne-Intanethi
El Ummiselo ka ewe Nokuba ichanekile ngokupheleleyo kwaye iyasebenza, iya kuba ngumlingani ogqibeleleyo xa usenza izigqibo. Sebenzisa i-tarot ye-ewe oyinyaniso okanye u-ewe amaxesha amaninzi njengoko ufuna, ngamakhadi amahlanu okanye amane, isimahla kwaye ikwi-Intanethi. Ukuba usebenzisa ikhadi ezintlanu, imibuzo kufuneka ingqale kwaye ingqale ukuze ukutolikwa koku kusebenze ..
Las amakhadi e-tarot hayi okanye ewe bazokunika ntoni impendulo xa uphosa amakhadi ama-5 iya kuba ibekwe embindiniOko kukuthi, ileta yesithathu. Ukutolikwa kuya kuba kwinani lamakhadi azakuvela ekunene, okanye inani lamakhadi eliya kubonakala umva. KWE-EWE uninzi kufuneka luvele kwicala lasekunene, kuba HAYI amakhadi kuya kufuneka abuyiselwe ikakhulu.
Tarot ewe okanye hayi amakhadi ama-5
Ukuba umbuzo oza kuwubuza iileta umalunga nothando, sicebisa ukuba usebenzise i uthando tarot ngempendulo enzulu kunye neyenzelwe wena enkosi kuma-mediums kunye ne-clairvoyants abeke onke amandla abo kumbuzo ngamnye.
Kwimeko apho amabini ukusuka ekunene kwaye amabini avela ngasemva avela, baya kuba njalo shuff deck yokudlala amakhadi ukwenza inkqubo kwakhona. Kodwa ukuba iziphumo ezifanayo ziphinda zivele, njengeqhina, mayiphumle iiyure ezimbalwa ngaphandle kokunyanzelisa, oko kuthetha ukuba amakhadi e-tarot ewe okanye hayi abaqinisekanga ngokupheleleyo ngempendulo esoteric.
Kwiwebhusayithi yethu Discover.online ungayenza Olunye uhlobo lokubaleka oluthembekileyo kunye nezinye iintlobo zetarot esebenzayo nesimahla, emva koko uzame ifayile ye isihlomelo ewe okanye hayi kwaye ubone ukuba sele uqinisekile ngempendulo yakho. Ukuba ufuna ukwazi ezinye iintlobo ze clairvoyance kwi-intanethi Ngaba uya kuba nakho ukuyenza ngokusebenzisa ibaleki, Uya kulazi ikamva lakho ngenkqubo yethu yokufunda nokubhala.
Tarot ewe okanye hayi ichanekile kwaye iyinyani
Ukufunda ewe / hayi ikhadi kwenza uqikelelo olusekwe kwitotot phendula ngo ewe / hayi umbuzo unengcinga ekuqaleni kokufunda.
Ukusetyenziswa kwetarot yasimahla kwi-Intanethi ewe okanye hayi
Injongo ka-ewe no-hayi kwenza ukuba oku kufundwayo kube luncedo kwabo bafuna isikhokelo ngamaxesha okudakumba okanye iimeko ezingaqondakaliyo.
Isebenza njani ewe okanye hayi
Ngaphambi kokukhetha ikhadi lakho, gcina ewe / Hayi umbuzo engqondweni. Kunokuba luncedo ukubhala umbuzo wakho ephepheni, okanye uwuthethe ngokuvakalayo.
Emva thetha nomlomo ukudlala ikhadi elikutsala kakhulu kumgangatho. Nantsi lapho Amakhadi angama-21 Omkhulu uArcana ukukhetha kunye 56 kwiNcinci Arcana. Ungasebenzisa isandla sakho esingalawulekiyo ukukhetha ikhadi lakho ukuba uyafuna; esi sandla sesona sesichengeni semikhosi yezendalo.
Abanye bacebisa Sebenzisa isandla sasekhohlo Kuba sisandla esiqhelekileyo ehambelana nokuvumisa ngeenkwenkwezi. Nje ukuba ukhethe ikhadi lakho ngokulichukumisa, liyabhabha ngomlingo ukutyhila impendulo yombuzo wakho.
Nje ukuba ikhadi livele, ungafunda ngakumbi ngalo. Phanda Intsingiselo yeArcana, kubandakanya iisimboli kunye nentsingiselo ngokubanzi ngokubhekisele kumbuzo wakho.
Ukuba ufuna ulwazi oluthe kratya malunga neleta, unokufunda ngakumbi ngokuyijonga kwiphepha le- Iintsingiselo zekhadi le-tarot. Apha unokufumana ulwazi ngakumbi malunga nentsingiselo yekhadi ngalinye.
Ukufundwa kwamakhadi asimahla ewe okanye hayi ethembekileyo
Ewe / Hayi Tarot Kukufunda endikucebisayo njengenxalenye yesiqhelo semihla ngemihla (okanye ubusuku). Ndigcina irekhodi lemibuzo yam endivumelayo jonga emva kumaxesha obomi bam ukubona ukuba luhlobo luni lweengcinga ezikhathaza intloko yam.
Into endiyithandayo ngale nto ifundwayo yindlela Ukuphelisa uxinzelelo. Ukuba umntu uhamba neemvakalelo zokunganqabiseki malunga nobudlelwane okanye umsebenzi, kuyanceda ukuqulunqa iimvakalelo ezingafaniyo kumbuzo ongu-ewe / hayi. Oku kuphela kukubuyisela kwimeko yesiqhelo.
Kwakhona, lo mdlalo unokuba uphoswe ngethemba xa umntu enomdla kwaye onwabile ngekamva, kwaye imibuzo inokuba yeyakho okanye ibekwe endaweni yomnye umntu.
Ikhadi le-tarot elitsaliweyo linika iingcebiso kunye neengcebiso ezikuncedayo khanyisa amanyathelo onokuwathatha malunga nombuzo wakhokunye neendlela ezintsha zokucinga malunga nomcimbi okhoyo.
Ukongeza, ukufunda kuzisa iingcinga ezifakwe nzulu ngaphakathi komhlaba zivumela ukuba baphinde babuyele kwihlabathi liphela, apho banokubakhanyisa kwaye babavuselele.
Uziva ntoni ngam?
Dibana okuhle tarot yomnxeba
Iingcwele zamaKatolika y Umthandazo kuSanta Cyprian